नेपाल आज | बारम्बार हाई आउँछ ? सजक रहनुहोस्, यस्ता समस्या हुन सक्छन
बारम्बार हाई आउँछ ? सजक रहनुहोस्, यस्ता समस्या हुन सक्छन
हाई आउनु एक सामान्य कुरा हो। हाई सामान्यतया सबैलाई आउँछ। हाम्रो बुझाईमा हाई आउनु भनेको अल्छिपनको संकेत हो। त्यस्तै कसैले कुरा गर्दै गर्दा हाई आउनु भनेको उनीहरुको कुरालाई बेवास्ता गरेको भन्ने बुझ्नु एकदमै गलत हो । हाई गर्दा अक्सिजन सिधै फोक्सोमा पुग्छ र यसले हाम्रो मुटुको धड्कनलाई समेत बढाईदिन्छ । जसको कारणले हामीलाई जागृत हुन मदत पुग्दछ ।
आज हामी सामान्य भन्दा धेरै हाई आएमा स्वास्थ्यमा पर्न जाने गम्भीर समस्याका बारेमा बताउन जादैछौं, आउनुहोस्
धेरै हाई आउने व्यक्तिलाई मुटुको समस्या हुन सक्छ । शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा मुटुले रक्तसञ्चार गराउन धेरै मिहनेत गर्नुपर्छ । त्यस्तो बेलामा छिन छिनमा हाई आउछ । कहिलेकाँही यस्तो अवस्था आईरहँदा हृदयघात समेत हुन सक्छ।
निन्द्रा पुरा भएन भने वा स्लीप एप्निया नामक डिसअर्डर भएका व्यक्तिलाई पनि असामान्य रुपमा धेरै हाई आउने समस्या देखिन्छ ।
छिनछिनमा हाई आउनु हाइपोथाइराइडको संकेत पनि हुनसक्छ । शरीरमा थाइराइड हार्मोन कम भयो भने पनि यस्तो असर देखिन सक्छ ।
हाम्रो शरीरको नशामा समस्या अर्थात नर्ब सिस्टममा गडबडी भयो भने पनि बारम्बार हाई आउने गर्छ ।
ब्रेनमा अक्सिजनको मात्रा कम र कार्वनडाईअक्साइडको मात्रा बढी भयो भने त्यसको असर फोक्सोमा पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा हाई बढी आउछ । जसले गर्दा ब्रेनमा अक्सिजन जाने दर बढ्छ र फोक्सोबाट खराब हावा निक्लन्छ ।
शरीरमा शक्ति कम हुँदा थकाई लाग्छ । यस अवस्थामा शरीरमा इनर्जी लेभल बढाउन धेरै अक्सिजन चाहिन्छ । यसैले पनि बढी हाई आउछ ।
कतिपय अनुसन्धानको दावी छ कि तनाव बढ्दा मस्तिस्कको तापक्रम बढ्छ । यसले पनि हाई अलि बढी आउछ । यसरी हाई आउदा मस्तिस्कमा धेरै अक्सिजन आउछ र दिमाग ठंडा हुन्छ ।